Macron: oo ka hadley hadalkii Tijaabin dawada COVID19 in lagu tijaabin doona Africa iyo dagaal dhex mara Mareykanka iyo Shiinaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Macron: oo ka hadley hadalkii Tijaabin dawada COVID19 in lagu tijaabin doona...
Macron: oo ka hadley hadalkii Tijaabin dawada COVID19 in lagu tijaabin doona Africa iyo dagaal dhex mara Mareykanka iyo Shiinaha
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muujiyay taageerada buuxda ee uu siinayo Ururka Caafimaadka Adduunka markii uu la xiriiray agaasimaheedii Arbacadii, maalin ka dib markii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleeceeyey jirka adduunka.
“(Macron) wuxuu carrabka ku adkeeyay kalsoonidiisa iyo taageerada uu uleeyahay ururka wuxuuna diiday inuu dagaal dhex dhigo Shiinaha iyo Mareykanka,” sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiiska ayaa u sheegay Reuters.
Macron, oo ah u ololeeya hay’ad badan, wuxuu hore ula shaqeeyay iska hor imaadyo aad uxun oo uu la yeeshay Trump sababta oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa dhaleeceeyey hay’adihii aasaasay iskaashiga caalamiga ah ee dagaalka kadib.
Elysee wuxuu cadeeyay in Macron uu xaqiijiyay mar uu lahadlayay agaasimaha guud ee WHO Tidros Adhanom Gebresus, in dhaqaatiirta faransiiska ee soojeediyey in lagu sameeyo tijaabooyin qaarada Africa lagana yaabo in lagu daaweeyo viruska Corona uusan matalin siyaasada rasmiga ah ee faransiiska.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ka jawaabaya hanjabaada Madaxweynaha Mareykanka, Talaadadii, inuu ka goynayo maaliyaddiisa isla markaana uu joojiyo tabaruca uu waddankiisu ku siiyo ururka, isagoo xusay in maalgelinta hay’addu aan la goyn doonin inta lagu jiro cudurka Covid-19.
“Hadda waxaan ku jirnaa marxalad ba’an oo ku saabsan cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan ‘Covid-19). Hadda ma ahan xilligii la dhimi lahaa maalgelinta,’ ayuu yiri Agaasimaha Gobolka ee WHO ee Yurub, Hans Klug.
Klug wuxuu faallo ka bixiyay saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu hanjabay hay’ad shir jaraa’id Talaadadii, ka dib markii uu ku weerarey barteeda twitter-ka hore wax ku saabsan waxa uu ku tilmaamay cunsuriyadda Shiinaha wuxuuna ku hanjabay inuu jari doono lacagahaas, isagoo leh “Waxaan joojin doonnaa bixinta lacagaha loo qoondeeyay Ururka Caafimaadka Adduunka.”
Shirka jaraa’id, Trump wuxuu ku eedeeyay Ururka Caafimaadka Adduunka inay la tacaalayaan dhibaatada cusub ee viruska Corona si liidata, sida uu qoray wargeyska Ingiriiska ee The Independent.
Trump wax faahfaahin ah ma uusan bixin, laakiin wuxuu shirkiisa jaraa’id ku sheegay inuusan weli go’aansan inuu joojiyo bixinta lacagta, isagoo tilmaamay inuu kaliya damacsan yahay inuu arrintan wax ka barto.
Trump ayaa yidhi, “Ururka Caafimaadka Adduunku wuu fashilmay, waxaa la yaab leh inay iyadu (ururku) ka heshay lacag badan anaga, laakiin diirada ay saarantahay Shiinaha. Waxay dhaleeceysay go’aankeyga ah inay ka hortagto Shiinaha inuu Mareykanka galo.”
Nasiib wanaagse, way diidey talo bixinteedii hore ee ahayd in xuduuda ay la wadaagto Shiinaha ay ahaato mid furan. Sow nama aysan siin talooyinkan qaldan?
“Waa inaan dib u eegno xiriirka aan la leenahay Ururka Caafimaadka Adduunka, maxaa yeelay waxay ahayd khalad oo waxay ahayd inay horay u sii sheegto cudurka faafa,” ayuu yidhi.